Banijya News | » कोरोना भाइरसको असर दरबार हाइस्कुलमा कोरोना भाइरसको असर दरबार हाइस्कुलमा – Banijya News
कोरोना भाइरसको असर दरबार हाइस्कुलमा
फागुन १७, काठमाडौ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाइस्कुल (भानु मावि) चीन सरकारको सहयोग बाट पुन निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण भने अनिश्चित बनेको छ ।
चीनको सरकारी इन्जिनियर टोलीले भवनको अनुगमन गरेपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ तर चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण हस्तान्तरण र चिनियाँ इन्जिनियरले अनुगमन गर्ने काम रोकिएको हो ।
कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछी चीनले देशबाहिर जाने तथा आउने उडानहरु बन्द गरेको छ । यही कारण अनुगमन गर्ने टोली नेपाल आउन सकेको छैन । २० फागुन सम्म दरबार हाइस्कुल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो । तर चिनियाँ टोली आउन नसक्दा हस्तान्तरण मिति अनिश्चित बनेको छ ।
गोर्खा भूकम्पका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएपछि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण भएको यस विद्यालय चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा बनेको हो । रु ८५ करोडको लागतमा नौ रोपनी जमीनमा निर्माण गर्न लागिएको यो विद्यालयको भवन चारतले र ४० कक्षाकोठाको भएको छ । यस भवनको नमूना ‘चाइना एभिएसन प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङ इन्स्टिच्युट’ले गरेको हो ।
यस्तो छ दरबार हाई स्कुलको इतिहास
जंगबहादुर राणाले विं सं १९१० असोज २७ मा नेपालमा पहिलो औपचारिक विद्यालय ‘दरबार हाई स्कूल’ स्थापना गरेका थिए। अहिले यो विद्यालयको नाम ‘भानु माध्यमिक विद्यालय’ छ। सुरुमा यो स्कूल थापाथली दरबारको आँगनमा थियो । भनिन्छ, त्यतीबेला अंग्रेजी शिक्षक बेलायतबाट झिकाइएका थिए ।
केही समयपछि यो विद्यालय कान्तिपथको चारबुर्जा दरबारमा सारियो। यो विद्यालय जमलको सेतो दरबार अनि नारायणहिटी दरबारभित्र पनि भएको तथ्यहरु छन् । निर्माण सुरु भएदेखि यतिबेलासम्म यो विद्यालयमा राजा महाराजाका छोराछोरीमात्र बस्न पाउने थिए। तर वि सं १९३३ मा रणोद्दीप सिंह श्री ३ भएपछि राणाहरूका सेवामा खटिएका जागिरदारका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था भएको बताइन्छ। उनको शासनकालमा नै विद्यालय फेरि थापाथली दरबारको दाखचोकमा सारियो ।
तर १९४२ मा रणोद्दीप सिंहको हत्यापछि वीरशमशेर श्री ३ बने र विद्यालयलाई जमलस्थित दरबारको ढोकानजिक टहरामा सारे । २०७२ सालमा भत्किएको त्यो भवन श्री ३ वीरशमशेरले १९४८ सालमा बनाएको भवन थियो। त्यही भवन दरबार हाई स्कुलको नाममा परिचित हुँदै आएको थियो। अनि वि।सं १९५७ सालमा देवशमशेर श्री ३ भएपछि दरबार स्कूलमा सर्वसाधारण जनताले पढ्न पाउने व्यवस्था भएको थियो। जुद्धशमशेरले यो विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था बनाएका थिए।
यो भवनलाई २०७२ मा मात्र हैन १९९० सालको भूकम्पले पनि प्रभाव पारेको थियो। छानामा समस्या आएपछि टायल हटाएर जस्ताको छानो राखेको थियो ।
वि.सं. १९४८ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री विर सम्शेरले निर्माण गरेको दरबार हाइस्कुलको भवन भूकम्पकै कारण दुई पटक भत्किएको थियो । पहिलोपटक वि.सं. १९९० सालको महाभूकम्पले दरबार हाइस्कुलको भवनमा क्षति पु¥याएको थियो भने दोस्रोपटक १२ बैशाख ०७२ को विनाशकारी भुकम्पले क्षति पु¥याएको थियो ।
०७२ को भुकम्पले क्षति पु¥याएपछि चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको दरबार हाइस्कुल भवनको बाहिरी भागलाई पुरानै स्वरूप दिइएको छ भने भित्री भाग आधुनिक डिजाइनमा निर्माण गरिएको छ । चीन सरकारको ८० करोड रुपैयाँ अनुदानमा नयाँ भवन निर्माण भएको हो । भवन निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने अधिकांश सामाग्री चीनबाटै ल्याइएको थियो ।